Home News Wasiir katirsan Xukuumada Somaliland oo sheegay in ay diyaar u yihiin wadahadal...
Wasiir katirsan Xukuumada Somaliland oo sheegay in ay diyaar u yihiin wadahadal iney la furaan Soomaaliya
Yaasiin Xaaji Maxamuud Wasiirka Arimaha dibada Soomaaliland oo la hadlay VOA-da ayaa waxaa ay ka hadlay wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland oo mudo badan hakad galay.
Wasiirka Arimaha Dibada ee Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliland ay diyaar u tahay in la bilaabo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Sidoo kale Wasiirka ayaa xusay in mar walba soomaaliland ay soo dhaweynayso cidkasta oo Waan waan ka galaysa wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Dhowr jeer ayay aheyd markii shir lagu wadahadal siinayo Soomaaliya iyo Soomaaliland uu ka dhacay Dalal badan oo saaxibo la ah Soomaaliya.
Previous articleSkin-lightening and Chemical Exposures in the Refugee and Immigrant Communities
Next articleKhilaaf xoogaan oo soo kala dhex-galay Madaxda ugu sareysa Maamulka Galmudug
Kulan xasaasi ah oo ay yeesheen Shiikh Sharif, Axmed Ducaale...